UKUHANJISWA KWEKRISIMESI EPHAMBILI YEAMAZON - UKUPHILA
Nantsi into ekufuneka uyenzile ukuba iphakheji yeAmazon ifike kade kwiKrisimesi
Ngoku ukuba iholide yokuthenga iyaphela, abantu abaninzi bayazibuza ukuba kuphi ukuthengwa okungekafiki.
Ukuba ufana nam, uthenge ngomzuzu wokugqibela ngeAmazon kuba, ngubani ongakuthandi ukuhanjiswa kweentsuku ezimbini? Kodwa ngamanye amaxesha umthengisi we-Intanethi akahambisi-ngokoqobo. Ngombulelo, iqela e Izibonelelo wanikela (akukho pun ejoliswe) isikhokelo esichaza ukuba wenzeni ukuba i-odolo yakho yeAmazon Prime ifike kade kwiKrisimesi.
Ithetha ukuthini xa uqhubeka ubona i-1111
Inkulumbuso yeAmazon isiqinisekiso seentsuku ezimbini isebenza kwixesha lokuhamba emva kokuhambisa. Oku kuthetha ukuba into yakho inokuba kwinqanaba lokuqhubekeka iintsuku ezi-2, kodwa xa ithunyelwe, iyakufika ngaphakathi kweeyure ezingama-48 zefestile.
Ukuba iodolo yakho iqinisekisiwe ngumhla othile kodwa ayifikanga ngexesha, kukho indlela yokufumana iperk okanye ezimbini kwiingxaki zakho. Umgaqo-nkqubo osemthethweni weAmazon kukubuyisa iindleko zokuhambisa ngenqanawa ukuba iodolo ifike yadlula kumhla oqikelelweyo; kodwa ukuba uhlawula ngeNkulumbuso, ukuhambisa sele kusimahla, akunjalo?
Ingcali yezezimali uClark Howard amabali ekwabelwana ngawo Ukusuka kubathengi beAmazon Prime abafikelele kwirhwebo enkulu malunga nokuhanjiswa kwabo kade. Nantsi into ababeyithetha:
Mandee: Ndithumele nge-imeyile malunga nepakeji yangezolo izolo kwaye babuyise imali yam bathi mandiyigcine xa ifikile.
ULaurel: Kukhe kwenzeka ukuba amaxesha amaninzi basinike ikhredithi eyi- $ 40 kwiakhawunti yethu kwaye bandise iNkulumbuso yethu.
ULori: Ndizamile namhlanje, bandinike imali eyi-10 yeedola ukuba ndithenge ngayo.
UDerek: Ndizamile oku ngokuhambisa okubambezelayo. Ndinento ebhetele kunokwandiswa kwenyanga yasimahla. Bandibuyisele i-30% ye-odolo yam yonke
Ukuba ubunephakheji yasemva kwexesha, ukufikelela kwiAmazon kulula. Landela ikhonkco kubo Qhagamshelana nathi iphepha, khangela iodolo kumbuzo, kwaye ukhethe umba kwimenyu eyehlayo (ziphi izinto zam?> ukuthunyelwa emva kwexesha).
Ngethamsanqa, iAmazon inika ithuba lokuncokola nommeli xa kuthelekiswa nokufowuna, ekuthe kubathengi, kwangqina ukuba iyakhawuleza kwaye ilunge ngakumbi.
Ndingumbhali wesiqingatha, umlinganiswa ophakathi. Ndibhala iposti nganye kwigumbi lokuhlala kwigumbi lokuhlala eWashington, DC.
Njani: Hlanganisa isakhelo ngaphandle kokushiya uMarko
Iibhedi zeAlcove Ngaba sisilumko sokwakha esingasokuze sifune ukushiya
Iindlela ezi-6 onokuthi unikele ngazo kwiNgcaciso yeelekese zeHalloween kwisizathu esifanelekileyo
Ezi zezona ziNdawo ziQhelekileyo zokuba abantu bafihle amaqhosha abo
Intsingiselo yamanani 1111
lithetha ntoni u-2: 22